Kukhona izimvilophu, izingubo zokulala izinsana ukuba akhishwe
Yiziphi bona? Ukukhishwa esibhedlela, yebo, inhliziyo kanye isikhathi esasijabulisa yimuphi umndeni. Inqobo nje uma wena kanye nengane yakho usesibhedlela, uPapa kubalulekile ukucabangela indlela ukuthi kuyoba ukukuhlangabeza ukuhlela ukugubha, umeme izivakashi ukuba banakekele etafuleni. Nokho, lokho ngeke agqoke izinyane, une ukulungiselela kusengaphambili. Namuhla kukhona ukhetho olukhulu zonke izinhlobo izingubo akhiphe, khetha ofanele ngawe akunzima. Ludzaba ahlukene - ke Ufaka esitatimendeni ngokuba ezisanda kuzalwa. Othile ngephutha ikholelwa ukuthi ukuthenga le nto kuphela eyodwa esikhathini esizayo ngeke kusetshenziselwe. Kodwa lokhu akulona icala. Yini ukugqoka nengane yakho kube uhambo? Ikhava, lapho ngokungazelelwe endlini kubanda? Kulezi zimo, nakanjani plaid ewusizo kakhulu.
Yiziphi mata esitatimendeni ngoba usana? Kuyinto ikhono layo ukufihla umntwana umoya abandayo, kodwa futhi ukubonakala. Njalo umama ufuna ingane yakhe ukuba njalo enhle kakhulu, imfashini kakhulu futhi ebukekayo. Ngakho-ke akuyona ohlangothini ezibalulekile yobuhle inkinga. Ngenhlanhla, izingubo zokulala izinsana ukuba akhishwe kuhlanganise, okwethulwa ezihlukahlukene omkhulu ongakhetha, amasayizi kanye nemibala.
White bekulokhu jikelele njalo. zokulala okunjalo kukhishwe Baby suit for abafana namantombazane. Nokho, i-choice eminye imibala ngeke kube ukuhlakanipha.
enhle kakhulu zokulala crocheted: ngezandla, ntambo elithambile, plus ukunakekelwa isandla mnene kamama ngeke uvikele ingane yakho ukulala. With Daze enjalo zokulala yakho asesabi lutho yesithwathwa ezinzima noma umoya abandayo. Needlewoman ongema futhi plaid ibophelana. Ungakwazi beveza siqu design zokulala zakho noma basebenzise izikimu ngomumo eyenziwe.
It yimfashini eminyakeni yamuva kukhishwe ezimvilophini ukuze izinsana. Lona ingubo efanayo, kodwa nge onqenqemeni yesimanje. Lezi zindlela zikholelwa ifomu elula swaddling ingane, leyo futhi walithanda mums abasha. onobuhle Abaningi abafiki ulwelwesi ukushisa namakhaza ukuthi isetshenziswa phakathi nenkathi ebandayo. Summer noma entwasahlobo kungaba asuswe imvilophi, eshiya inguqulo ethambile.
Yiqiniso, isinqumo kuhlale kungokwakho. Ungathenga imodeli engabizi, kodwa esiwusizo kakhulu. Kukhona zokulala uphawu phezu isitatimende izinsana, ngomqondo ongokomfanekiso, ukuba ishicilelwe. Kulokhu, kuzodingeka ukuthenga esinye, kube lula ukuhamba nsuku zonke.
Kungakhathaliseki ukubukeka plaid, odokotela abeke izimfuno zabo. Futhi lapha endaweni yokuqala ukuphepha ingane. Noma yimuphi isitatimende zokulala izinsana kufanele senziwe izindwangu yemvelo ukuthi abakwazi ukulimaza izingane. Ikakhulukazi, izingane eziningi isakhasa - komzimba eqinile. Ecasulayo ngabo kungaba zokwenziwa fibre, uma ikhona, e zokulala. Ukotini mata abhekwa ekahle, abazi vyzyvyut ukuqubuka ukuqubuka kwesikhumba, ngaphezu, ziyasiza kakhulu ukusetshenziswa. Lapho uthenga ingubo umntwana isheke ukuze iphunga isici lovela impahla. Ekugcineni, kufanele uqonde into esemqoka: intengo - lesi sibalo kungaqali izinga njengoba izesekeli uphawu kanye ukubukeka kwayo yonke indawo ingubo.
Amathoyizi Shopkins Wezingane: Izibuyekezo
Yini umntwana ngikhala?
Artificial yokudla osanda kuzalwa: imithetho eyisisekelo
Nezimfumbe mayelana amahlosi: cwaningo izilwane zasendle
Indlela yokwenza "Lego" isakhiwo: imfundo enemininingwane. Kanjani ukwakha indlu kusukela "Lego"
Indlela yokwenza ithoyizi-khenqeza ngezandla
Ungasusa kanjani kusuka ku- "Maynkraft"?
Cap-Stocking - accessory imfashini kwesizini
Dor - lokhu kubuyisela: ngomuthi omusha
Uremia - a ... uremia: izimbangela, izimpawu kanye nokwelashwa
Isilinganiselwa amanyuvesi eMoscow. amanyuvesi eziphezulu eMoscow
Ukushintsha Isimo abakhuluma isiRashiya futhi lesiNgisi Inthanethi
Kuyini overdraft amakhadi? Overdraft, ikhadi
Izindawo ezinamandla ezinamathangi ku-World of Tanks. Izimfihlo izindawo ezibuthakathaka emathangi
Ukuvuza ohlelweni defrosting: Uma esiqandisini yakho "ukukhala" - kuhle
Ziyadliwa Manchurian. izakhiwo awusizo kanye nokwelashwa kwezifo
Udizili imoto ngeke ukuqala kubanda. Yini okumelwe uyenze?
Hybrid injini - amathuba amasha ICE